Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Ismiidaaminta Injineerada Turkiga lagu qaaday – AfmoNews
Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Ismiidaaminta Injineerada Turkiga lagu qaaday
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Khasaaraha dhimashada & midka dhaawaca ah ee ka dhashay Qarax Ismiidaamin ah oo Shabaab ay ku qaadeen Ciidamada & Injineerada Turkiga ee ku hawlan dhismaha wadada isku xirta Muqdisho & Afgooye.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga oo ka hadashay qaraxaasi ayaa waxa ay cambaareysay weerarkaasi, waxaana ay sheegtay waxyeelo inay ka soo gaartay muwaadiniin Turki ah.
Turkiga ayaa xaqiijiyay in hal Muwaadin uu qaraxaas uga geeriyooday, halka afar kalena ay dhaawacyo soo gaareen, kuwaasi oo ka mid ahaa Injineero dhisayay wadada isku xirta Magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Al Shabaab oo sheegatay masuuliyadda Qaraxan waxa ay sheegeen inay ku dileen muwaadin u dhashay dalka Turkiga, sidoo kalena ay ku dhaawaceen Askar ka tirsan Booliska Haramcad.
Weerarkaasi Ismiidaaminta ah ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay inta u dhaxeysa Lafoole & Xaawo Cabdi, gaar ahaan halka loo yaqaan Sos oo dhismaha wadada ay mareyso.
Waa markii labaad oo qarax ismiidamin ah lagu weeraro Injineerada dhismaha ka wada wada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, waxaana ay aheyd 28-kii Bishii December ee sanadkii 2019 markii qarax Gaari loo adeegsaday lagu weeraray Injineerada Turkiga xilli ay ku sugnaayeen Isgoyska Ex-Koontorool Afgooye, waxaana qaraxaasi ku dhintay dad u badnaa Shacab.